Sarara baaqqee addaan fageenyaa keewwata ammee fayyadama.kun qindaa'ina durtiitii.
Sarara addaan fageenya gara sararawwan 1.5 tti qindeessa.
Sarara addaan fageenya gara sararawwan qindeessa.
Keewwata gara bitaa mudana fuulaatti hiriirsa.
Qabeentoota keewwataa fuula irraa handhuuressa.
keewwata gara mudana fuulla mirgaatti hiriirsa.
keewwata gara bitaa fi mirga mudanoota fuulatti hiriirsa.